အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဝက်သားလုံးကြော်
တောင်းဆိုထားတာနဲ့ ခုတော့ ကြုံလို့ ပုံတွေပါ သေသေချာချာရိုက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် .......
ကြက်သွန်နီ တောက်တောက်စင်းတာထည့်။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့် သကြားထည့် တရုတ်မဆလာထည့်......ပုံ ၂ ကိုသေချာကြည့်ပါ ပဲငံပြာရည်အနောက်လေး နည်းနည်းထည့်ပါသေးတယ်။ အော်နောက်လျှို့ဝှက်ချက်တခု ပြော
ပြားကြော်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်..... အဲ့တော့ နာမည်အပျက်မခံနိုင်ပါဘူး ဝက်သားလုံးကြော်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုံး ပါ။ မရရအောင်လုံးပါ တီချမ်း ကိုနာမည်မဖျက်ပါနဲ့။
နောက် အချဉ်စပ်စရာ ချီးပမ်းချဉ် မရှိတာကော ပျင်းတာကော နဲ့ ပေါင်းစပ် အကြောင်းပြပြီး သကာလ အလွယ် ရှိတဲ့ ဆူကီ့ အချဉ်နဲ့ပဲ တို့စားပလိုက်တာပါပဲ။ ကဲ လွယ်လဲလွယ် ကောင်းလဲကောင်းတဲ့ ဝက်သားလုံးကြော်....... တီချမ်း ကိုယ်တိုင်ဖော်စပ်၍ ယိုးဒယားပြည်တွင် ခေတ္တ ထုတ်လုပ်သည်။ လူမျိုးဘာသာမရွေ မသုံးဆောင်နိုင်ပါ။
Posted by တီချမ်း at 5:48 AM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အသားကြော်
Evy April 9, 2012 at 10:50 AM
ဟုတ်တယ် ။အပေါ်က Evy မေးသလိုဘဲ၊ ၀က်သားလုံးကြော်ထဲကို ပဲမှုန်.ဘာလို.ထည်.တာလဲဟင်။ “
အမြဲတမ်းတော. ကော်မှုန်.ထည်.တာ၊ပဲငံပြာရည်ထည်.တာ၊ ကြက်သွန်နီထည်တာတွေသိတယ်လေ။
မြတ်ကြည် April 9, 2012 at 8:10 PM
ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်တာ။ စာရေးတာပုံလေးက ဖတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဝက်သားလုံးကတော့ အားတိုင်းကြော်နေကျ။ ပဲမှုန့်တော့မထည့်မိဘူး။ နွားနို့ထည့်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ကြော်ကြည့်ဦးမယ်။
မွေးကတည်းက တော်တီးတီးတော် တဲ. တီချမ်းအစားဖြေရရင်တော.
ပဲမှုန်.တွေက တချို.အကြော်ကြော်ရင် ထည်.တယ်လေ
ဘူးသီးကြော် ကြက်သွန်ကြော် အစရှိသဖြင်.ပေါ.
မွေးကတည်းက တော်တီးတီးတော် သူတစ်ဦး
တီချမ်း April 9, 2012 at 10:06 PM
အီဗီရေ ကြည်လဲ့က ပြောတော့ပြောတယ် ပဲမှုန့် ဘာ့ကြောင့်ထည့်ရတာလဲဆိုတာ တီမမှတ်မိတော့ဘူး အောက်က အနောနိမတ်စ်ဖြေတာပဲ ကြည့်လိုက်တော့ အမှန်ကတော့ တီထင်တယ် ရောင်းတန်းဆိုတော့ ဝက်သားနည်းနည်းကို အလုံးများများ ထွက်အောင်လုပ်တာပေါ့ ကြက်သွန်ထည့်တာလဲဒီသဘောပဲဖြစ်မယ် အဲ့တာမှ အသားနည်းနည်း ကို ပွဲများများ ထွက်မယ် အမှန်ကတော့ ပဲမှုန့် ထည့်တာ သိပ်မကောင်းဘူး သူက အသားကို နည်းနည်းမာစေတယ် အဲ့တာကြောင့်တီကတော့ နောက်တခေါက်ဆိုရင် ကော်မှုန့်နဲ့ပဲ လုပ်မယ် စိတ်ကူးတယ်
ဇက်နဲ့ မြတ်ကြည်ရေ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးပါ
တီ ကိုနာမည် ဖျက်လိုက်တယ်။ လုံးရမှာပျင်းလို့ အပြားကြီးတွေပဲ ကျော်လိုက်တယ်။ ကောင်းတာပါပဲ